ईसाई - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
हाम्रो बारे > WKG लाई विश्वास गर्नुहोस् > ईसाई
परमेश्वरको सन्तान हुनु भनेको के हो?
तर आकारको उनको धारणा गलत मानहरूमा केन्द्रित छ। येशू उनीहरूलाई देखाउँनुहुन्छ कि परमेश्वर आफ्ना जनहरूमाझ बोल्ड कार्यहरू देखाउन वा देखाउन चाहनुहुन्न, तर यस्ता सुविधाहरू जुन बच्चाहरूमा फेला पर्दछ। यो निश्चित छ कि यदि तपाईं साना बच्चाहरूको जस्तो बन्नुभएन भने, तपाईं कुनै पनि ठाउँमा प्रवेश गर्नुहुनेछैन!
हामीलाई चाहिने गुणहरूमध्ये एउटा नम्रता हो, किनकि मत्ती १ 18: in मा येशूले यसो भन्नुभएको छ: "जसले आफूलाई यस बालकजस्तै आफूलाई नम्र तुल्याउँछ स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा ठूलो हो।" परमेश्वरको धारणा अनुसार, नम्र व्यक्ति सबैभन्दा ठूलो हो - उसको उदाहरण परमेश्वरको नजरमा सब भन्दा राम्रो हो जुन ऊ आफ्ना जनहरूमा हेर्न चाहन्छ।
राम्रो कारण संग; किनभने नम्रता भनेको ईश्वरको गुण हो। हाम्रो उद्धारको लागि परमेश्वर आफ्ना विशेषाधिकारहरू त्याग्न तयार हुनुहुन्छ। येशूले शरीरमा हुँदा के गर्नुभयो त्यो परमेश्वरको स्वभावको विसंगति थिएन, बरु परमेश्वरको स्थायी र वास्तविक अस्तित्वको प्रकाश हो। परमेश्वर हामी येशूजस्तै भएको चाहनुहुन्छ, अरूको सेवा गर्ने सुअवसरहरू त्याग्न तयार हुनुहुन्छ।
केही बच्चाहरू नम्र हुन्छन्, अरुहरू हुँदैनन्। येशूले एउटा विशेष बच्चालाई एउटा कुरा स्पष्ट पार्न प्रयोग गर्नुभयो: हामीले केटाकेटीहरू जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ - विशेष गरी परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा।
आजको प्रार्थनामा अब्बा शब्द प्रयोग गर्नु आवश्यक छैन। तर प्रारम्भिक चर्चमा यो शब्दको व्यापक प्रयोगले यसले चेलाहरूलाई धेरै प्रभावित पारेको छ। उनीहरूलाई परमेश्वरसँग नजिकको सम्बन्ध भएको थियो, यस्तो सम्बन्ध जसले येशू ख्रीष्टमार्फत परमेश्वरमा उनीहरूको पहुँचको ग्यारेन्टी गर्दछ।
अब्बा शब्द विशेष थियो। अन्य यहूदीहरूले त्यस्तो प्रार्थना गरेनन्। तर येशूका चेलाहरूले यो काम गरे। उनीहरू भगवानलाई आफ्नो बुबाको रूपमा चिन्थे। तिनीहरू राजाका छोराहरू थिए, चुनेका राष्ट्रका सदस्यहरू मात्र होइन।
पुनर्जन्म र अपनाउने
विभिन्न रूपकहरूको प्रयोगले प्रेरितहरूलाई नयाँ समुदायको अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्थ्यो जुन विश्वासीहरूले परमेश्वरसँगको नयाँ समुदायमा व्यक्त गरेका थिए। मुक्ति शब्दले हामी परमेश्वरको सम्पत्ति हुनेछौं भन्ने धारणा प्रदान गर्‍यो। येशू ख्रीष्टको मृत्यु - हामी एक ठूलो मूल्य मा पापको दास बजारबाट छुटकारा पाए। "पुरस्कार" कुनै विशेष व्यक्तिलाई दिइएको थिएन, तर यसले हाम्रो उद्धार महँगो थियो भन्ने सोचाइ दिन्छ।
मेलमिलाप शब्दले हामी कुनै समय परमेश्वरका शत्रुहरू थियौं र येशू ख्रीष्ट मार्फत मित्रता पुनःस्थापित गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई जोड दियो। उहाँको मृत्युले हामीलाई पापहरू हटाउन अनुमति दियो जसले हामीलाई हाम्रा पापहरूको दर्ताबाट परमेश्वरबाट अलग गर्यो। भगवानले यो हाम्रोलागि गर्नुभयो किनकि हामी आफैले सम्भवतः त्यसो गर्न सक्दैनौं।
त्यसोभए बाइबलले हामीलाई थुप्रै समानताहरू दिन्छ। तर तथ्य यो छ कि बिभिन्न समानताहरू प्रयोग गरिएको छ भन्ने तथ्यले हामीलाई यो निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ कि ती मध्ये कुनै पनि एक्लैले हामीलाई पूर्ण तस्वीर दिन सक्दैन। यो विशेष गरी दुई उपमानहरूको लागि सत्य हो जुन अन्यथा एकअर्काको विरोधाभासपूर्ण हुन्छन्: पहिलो देखाउँदछ कि हामी माथिबाट परमेश्वरका सन्तानको रूपमा जन्मेका थियौं र अर्को जुन हामीले अपनाएको थियो।
यी दुई समानताहरूले हामीलाई हाम्रो मुक्ति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछन्। नयाँ गरी जन्मनु भनेको हाम्रो मानवमा आमूल परिवर्तन हुन्छ, यो परिवर्तन सानो देखि शुरू हुन्छ र हाम्रो जीवनको क्रममा बढ्दछ। हामी नयाँ सृष्टि, नयाँ व्यक्ति जो नयाँ युगमा बाँचिरहेका छौं।
धर्मपुत्र बनाउनु भनेको हामी एक समय राज्यमा परदेशी थियौं, तर अब परमेश्वरको निर्णय र पवित्र आत्माको सहायताले परमेश्वरका सन्तानहरू घोषणा गरिसकेका छौं र उत्तराधिकार र पहिचानको पूर्ण अधिकार छ। हामी, पहिले टाढा रहेका, येशू ख्रीष्टको बचत कार्यको नजिक ल्याएका छौं। हामी उहाँमा मर्छौं, तर हामी उहाँकै कारण मर्दैनौं। हामी उहाँमा बाँचिरहेका छौं, तर यो हामीभित्र बाँचिरहेको छैन, तर हामी नयाँ मानिस हौं जो परमेश्वरको आत्माले सृष्टि गरेका छौं।
प्रत्येक रूपकको यसको अर्थ हुन्छ, तर यसको कमजोर पोइन्टहरू पनि। भौतिक संसारमा कुनै पनि कुराले भगवानले हाम्रो जीवनमा के गर्दछ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा प्रकट गर्न सक्दैन। उनले हामीलाई दिएका उपमाहरूसँग, परमेश्वरको छोराको बाइबलीय छवि विशेष रूपमा सहमत छ।
कसरी बच्चाहरू हुन्छन्
परमेश्वर सृष्टिकर्ता, प्रबन्धक र राजा हुनुहुन्छ। तर हाम्रोलागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त उहाँ बुबा हुनुहुन्छ। यो एक घनिष्ठ बन्धन हो जुन पहिलो शताब्दीको संस्कृतिको सबै भन्दा महत्वपूर्ण सम्बन्धमा अभिव्यक्त हुन्छ।
त्यसबेला समाजका मानिसहरु उनीहरुका पिताबाट चिनिए। उदाहरणको लागि, तपाईंको नाम एलीको छोरो जोसेफ हुन सक्थ्यो। तपाईंको बुबाले समाजमा तपाईंको स्थान निर्धारण गर्नुहुने थियो। तपाईंको बुबाले तपाईंको आर्थिक स्थिति, तपाईंको पेशा, तपाईंको भावी जीवनसाथी निर्धारण गर्ने थियो। जे तपाईंले विरासतमा पाउनुभयो ती तपाईंको बुबाबाट आएको थियो।
आमाहरू आजको समाजमा बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। धेरै मानिसहरू आज आफ्ना बाबु भन्दा आमाको साथ राम्रो सम्बन्ध छ। यदि आज बाइबल लेखिएको भए, निश्चित रूपले मातृ दृष्टान्तहरूलाई पनि ध्यानमा राख्ने थियो। तर बाइबलीय समयमा, पैतृक दृष्टान्तहरू महत्त्वपूर्ण थिए।
परमेश्वर, जसले कहिलेकाहिँ आफ्ना मातृत्व गुणहरू प्रकट गर्नुहुन्छ, आफूलाई सधैं पिता भनिन्छ। यदि हाम्रो सांसारिक पितासँगको सम्बन्ध राम्रो छ भने, समानता राम्रोसँग काम गर्दछ। यद्यपि, यदि हाम्रो बुबासँग नराम्रो सम्बन्ध छ भने, उहाँसितको हाम्रो सम्बन्धबारे परमेश्वरले हामीलाई के स्पष्ट पार्न खोजिरहनुभएको छ भनेर बुझ्न हामीलाई गाह्रो लाग्छ।
परमेश्वर हाम्रो पार्थिव बुबाभन्दा राम्रो हुनुहुन्न भन्ने न्यायको हामी हकदार छैनौं। तर हुनसक्छ हामी उहाँलाई सिर्जना गर्न आमाबाबु संग एक आदर्श सम्बन्ध मा कल्पना गर्न को लागी पर्याप्त छ कि एक मानिस कहिल्यै पुग्न सक्दैन। परमेश्वर सबैभन्दा असल बुबा भन्दा राम्रो हुनुहुन्छ।
हामी कसरी परमेश्वरका छोरा-छोरीहरू परमेश्वरलाई हाम्रो पिताको रूपमा हेर्दछौं?
हामीप्रति परमेश्वरको प्रेम गहिरो छ। उहाँ हामीलाई सफल बनाउन त्यागहरू गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आफ्नो समान बनाउनु भयो र हामी सम्पन्न भएको हेर्न चाहानुहुन्छ। अक्सर, आमा बुबाको रूपमा हामी केवल यो महसुस गर्दछौं कि उनीहरूले हाम्रो लागि गरेका सबै कुराको लागि हामीले आफ्ना आफ्नै आमाबाबुको कदर गर्नुपर्छ। परमेश्वरसंगको हाम्रो सम्बन्धमा हामी केवल उहाँ आफैले भलाईको निम्ति भोग्नु भएको अनुभव गर्न सक्दछौं।
उहाँमा पूर्ण रूपमा निर्भर भएकोले हामी परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा राख्छौं। हाम्रो आफ्नै सम्पत्ति पर्याप्त छैन। हामी उहाँलाई हाम्रो आवश्यकताहरू हेरचाह गर्न र हाम्रो जीवनको लागि निर्देशन दिन भरोसा गर्दछौं।
हामी हरेक दिन उहाँको सुरक्षाको आनन्द लिन्छौं किनकि हामीलाई थाहा छ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हाम्रो हेरचाह गर्नुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रा आवश्यकताहरू छन्, दैनिक रोटी होस् वा आपतकालमा मद्दत गर्नुहोस्। हामीसँग छैन
चिन्ताले चिन्तित हुनुहोस् किनकि बुबाले हाम्रो ख्याल राख्नुहुनेछ।
बच्चाहरूको रूपमा, हामी परमेश्वरको राज्यमा भविष्यको ग्यारेन्टी हुन्छौं। अर्को समानता प्रयोग गर्न: उत्तराधिकारीको रूपमा, हामीसँग अतुलनीय धन सम्पत्ति हुनेछ र त्यस्तो शहरमा बस्नेछौं जहाँ सुन धूलो जत्तिकै प्रशस्त हुनेछ। आज हामीसित आध्यात्मिक ज्ञान छ जुन हामीलाई थाहा छ भन्दा बढि मूल्यवान् छ।
हामीसँग आत्मविश्वास र साहस छ। हामी सतावटको डरविना खुलस्त प्रचार गर्न सक्छौं। यदि हामी मारिए पनि हामी डराउँदैनौं; किनभने हाम्रो बुबा हुनुहुन्छ र कसैले पनि हामीबाट टाढा लिन सक्दैन।
यी ठूलो आशिष् हो। हुनसक्छ तपाई अझ बढी सोच्न सक्नुहुन्छ। तर म पक्का छु कि ब्रह्माण्डमा परमेश्वरको बच्चा हुनु भन्दा राम्रो अरू केही छैन। त्यो परमेश्वरको राज्यको सबैभन्दा ठूलो आशिष् हो। जब हामी साना बच्चाहरू जस्तै हुन्छौं, हामी सबै आनन्द र सबै आशिष्का उत्तराधिकारी हुन्छौं
परमेश्वरको अनन्त राज्य जो हल्लाउन सकीदैन।